Khabiirka Cilmiga - Sidee u dhigi kartaa caruurtaada inay fahmaan oo ay iska ilaaliyaan Malware
Waxaan ka warqabnaa xaqiiqda ah in dugsiyadu intooda badan aysan barin sida loo badbaadiyo internetka iyo sida looga fogaado nacasnimada iyo fayrasyada. Waxaa laga yaabaa inay muhiim tahay in la fahmo muhiimada tiknoolajiyada macluumaadka ee nolosheena iyo in ay ku adkaato dhibaatooyinka tiknoolajiyada la xidhiidha. Taas awgeed, waxaan ku qasbanaan lahayn in aan barno aasaaska u ah caruurteena. Haddii kale, ma jirto fursad aan ku guuleysan karno.
Ryan Johnson, khabiirka ugu horreeya ee ka socda Semalt , wuxuu la wadaagaa waayo-aragnimadiisa wuxuuna qeexayaa talooyin waxtar leh oo carruurtaada ah si aad ugu badbaado internetka.
Sida ay carruurteenu waqti ugu qaadato internetka
Ugu horreyntii, waa in aan ogaanaa sida carruurtayadu waqti loogu isticmaalo webka. Su'aasha kale waa sidee ayaan uga caawin karnaa inay fahmaan xajinta iyo sida looga takhaluso. Waxaan ka caawin karnaa inay horumariyaan fahamka nadaafada iyo feylka iyaga oo siinaya shaqooyin joogto ah. Waa waajibka macalimiintayaga si ay u siiyaan carruurta hawlaha la xiriira kombuyuutarka waxayna ka caawiyaan inay xalliyaan su'aalaha.
Barida carruurta leh fiidiyo ku habboon
Fiidiyowyo badan oo fiidiyoow ah oo ku saabsan fayraska kombuyuutarka ayaa laga heli karaa internetka. Waa run in fiidiyowyada intooda badani ay ku wajahan yihiin dadka waaweyn, laakiin taasi micnaheedu ma'aha in carruurteenu aanay ka heli karin waxtarka iyaga. Fiidiyowyo badan oo YouTube ah ayaa dadka u sheega waxyaabo badan oo ku saabsan sida loo hagaajin karo goobaha amniga iyo sida loo soo iibsado barnaamijyada iyo ciyaaraha saaxiibtinimo si joogto ah. Sidaa daraadeed, waa waajibka waalidkeena iyo macallimiinteena in ay helaan carruurta fiidiyowyo waxtar leh oo ku saleysan heerka fasalka iyo awoodaha maskaxda. Dhawaanahan, waxaan helay waxyaabo badan oo warar ah oo khuseeya khataraha internetka. Waxaan u qeybin karnaa caruurteenna sidoo kale si ay u akhriyaan una bartaan waxyaabo cusub
Haa, waa run in aan isticmaalo bandhigyada PPT si aan baro carruurteyda wax badan oo ku saabsan ammaanka iyo badbaadada kaliya. Waxyaabaha ugu horeeya waa in la helo carruur badan oo fiidiyowyo ah iyo bandhigyo PPT ah oo ku saabsan bini'aadamka iyo fayraska iyo sida looga takhaluso. Marka ay soo maraan qalabka la bixiyay, tallaabada xigta waa in la waydiiyo su'aalo dhowr ah si ay u hubiyaan haddii ay barteen dhamaan asaasiga ama maahan. Dadku waxay aaminsan yihiin in carruurtoodu ay nabdoon tahay inta ay internetka u socdaan ama isticmaalka warbaahinta bulshada ay khalad weyn sameeyaan. Waxaa jira waxyaabo badan oo u baahan in la fiiriyo, dabcan, waa in aan u gudbinnaa aqoonta yar ee yaryar ee mustaqbalkooda ammaan iyo ammaan. Carruurta ka hooseysa toddoba, waxaan ku heli karnaa noocyo buugaag sawir ah oo la xiriira fayrasyada iyo nadaafadda. Buugaagtaan, waxaan ku baran karnaa sidii loo diyaarin lahaa mustaqbal iyo sida loo hubiyo badbaadadooda internetka.
Marka ay timaado fayrasyada iyo nadaafadda, dadka waaweyn iyo caruurta labadaba waxay u baahan yihiin inay bartaan aasaaska aasaasiga ah. Qof walba, ammaanka internetka waa mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee maalmahan. Haddii aynaan fiiro gaar ah u laheyn barnaamijka antivirus iyo barnaamijyada ladagaallanka lidka ku ah, waxaanu halis ugu jirnaa inaan lumino dhammaan xogtayada iyo feylasha xasaasiga ah. Isla arrimood waa in lagu baraa caruurteena. Iyadoo la adeegsanayo warbaahinta bulshada, waa inay hubiyaan in faylasha iyo lambarkooda aan la jabin Source . Sidaa daraadeed, macallimiintu waa inay u sameeyaan fasalo dheeri ah oo carruurta loogu talagalay in ay muxaadarooyin u gudbiyaan khayaanada iyo fayrasyada